Maitiro ekugadzira dhairekitori muLinux uye mamwe anobatsira mirairo | Linux Addicts
Maitiro ekugadzira dhairekitori muLinux uye nemimwe mirairo inobatsira
Diego ChiGerman Gonzalez | 27/04/2022 11:15 | Sisitimu Yekutonga, General, GNU/Linux
Iyo Linux dhairekitori inotevera iyo Unix File Hierarchy Standard ine mamwe magadzirirwo.
Kubva pakuonekwa kweiyo yekutanga graphical operating system muma60, makomputa ese anoshanda nedimikira rehofisi.. Mafaira anonzi magwaro uye anochengetwa mumafolder. Iwo maforodha anozorongeka zvinoenderana nezviri mune mamwe maforodha. Zvichienderana nehuwandu hwekuwana, mushandisi achave nemukana wekugadzirisa kana kusagadzirisa zvirimo.
Mune ino post tichaona nzira yekugadzira dhairekitori mulinux uye kushanda nayo ese ari maviri achishandisa terminal emulator (kubva ikozvino pane terminal) uye graphical terminal.
1 Chii chatinodaidza dhairekitori muLinux?
1.1 Iyo Linux Directory Mamiriro
2 Maitiro ekugadzira madhairekitori muLinux
2.1 Shandisa iyo terminal kana kuti ita zvine graphic?
Chii chatinodaidza dhairekitori muLinux?
Tiri muLinux tinotaura nezvazvo dhairekitori, paWindows tinoreva midziyo yemafaira se maforodha.
Linux, macOS, uye BSD derivatives zvese zvakatora iyo Unix faira chimiro uye terminology, nepo Windows yaienda yayo yega. Tinogona kutaura kuti dhairekitori mune aya anoshanda masisitimu iWindows folda ine rimwe zita, asi sezvo UNIX yakura, ndizvozvo kutaura kuti Windows folda ndiyo dhairekitori rakatumidzwa zita. Iyo dhairekitori inonyoresa zvirimo muindex ichiita kuti nzvimbo yacho ive nyore. Izvi zvinoreva kuti Documents dhairekitori harina magwaro anoratidzwa paunoriwana. Chainochengetedza inzvimbo chaiyo yemagwaro iwayo.
Iyo Linux Directory Mamiriro
Kwete mukudoma chete, UNIX-yakafuridzirwa masisitimu anoshanda anotevera nzira yakasiyana pane Windows. Zvakare mune dhairekitori chimiro. PaWindows, chigadziro chinozivikanwa nebhii guru rinoteverwa ne: \_ apo paLinux base dhairekitori rinozivikanwa se /
Kufanana nezvimwe zvinobva, Linux inoshandisa iyo File Hierarchy Standard kana Filesystem Hierarchy Standard kune acronym yayo muChirungu, kunyangwe ichigadzirisa zvimwe. MuLinux system tinowana zvinotevera madhairekitori:
/: Ndiyo midzi dhairekitori ine mamwe madhairekitori ese. Kunyangwe mafaera ari mune mamwe matura ekuchengetedza akanyorwa mukati meiyo dhairekitori.
/bhini: Essential user mabhinari akachengetwa pano. Ndiko kuti, mapurogiramu anofanirwa kunge aripo ekushanda kwehurongwa kana kwekutanga kushandiswa.
/ boot: Ichi chikamu chinonyora mafaera anodiwa kutanga sisitimu, senge bhutsu maneja uye akasiyana vhezheni ekernel akaiswa.
/CD ROM: Inoratidza mafaera akanyorwa pacd kana dvd akaiswa mudhiraivha.
/dev: Ichi chikamu chinonyora zvishandiso zvakabatana sedhairekitori. Mu / dev kune marudzi maviri makuru emidziyo, iyo inonzi dhizaini dhizaini ndeiya inochengeta kana kuchengetedza data (dhisiki madhiraivha), nepo izvo zvinonzi zvigadziriso zvehunhu zviri izvo zvinofambisa kana kutamisa data (kiyibhodhi, mbeva, kubatanidza ports). )).
/ nezvimwewo: Inochengetedza mafaira ekugadzirisa ehurongwa hwose. Ivo vanogona kugadziridzwa nemavara edhita ane mvumo inoenderana.
/kumba: Kune akawanda / epamba maforodha sezvo kune vashandisi pane system. Iyo ine data uye gadziriso mafaera emumwe nemumwe wavo. Muchidimbu, mushandisi wega wega anogona kugadzirisa yavo / imba dhairekitori, asi. kugadzirisa vamwe, unofanirwa kuve maneja.
/lib: Kuti uderedze nguva yekugadzira uye dhisiki nzvimbo, vanogadzira mapurogiramu vanowanzo tendeukira kune wechitatu-bato zvirongwa kuti vaite mabasa akajairika sekuchengetedza kana kudhinda faira kana kuratidza menyu. Zvirongwa izvi zvinodaidzwa kuti maraibhurari. Iyi chikamu chedhairekitori inochengeta maraibhurari anoshandiswa nezvirongwa zvakachengetwa mu/bin uye/sbin madhairekitori.
/rasika+rakawanikwa: Muchiitiko chekutadza kwefaira system, mafaira akakuvadzwa anozonyorwa muchikamu chino kana sisitimu yatangwazve. Nenzira iyi zvinogoneka kuvaona uye kuyedza kudzoreredza data rakawanda sezvinobvira.
/hafu: A subdirectory inovhurwa pano kune yega yega yekuchengetera mudziyo wakabatana nekombuta.
/mnt: Mafaira masisitimu anowanikwa kwenguva akaiswa panzvimbo ino.
/ opt: Ndiyo nzvimbo iyo mafaera ezvirongwa akaiswa pamaoko anowanzo kuchengetwa.
/ proc: Iine akakosha mafaera anomiririra sisitimu uye kugadzirisa ruzivo.
/mudzi: Ndiyo / imba dhairekitori yemushandisi we admin. Nezvikonzero zvekuchengetedza, haina kuisirwa mune iyi folda nevamwe vese vashandisi.
/ kumhanya: Yakanakira nzvimbo yemaapplication ekuchengetedza data renguva pfupi pasina njodzi yekudzimwa netsaona nevechitatu mapato.
/sbin: Iine mabhinari anodiwa nemudzi wekushandisa kune system management.
/selinux: SELinux imodhi yekuchengetedza yeLinux kernel. Mune ino dhairekitori tinowana akakosha mafaera aanoshandisa akanyorwa.
/srv: Iro dhairekitori rinoshandiswa nemamwe masevhisi (akadai sewebhu server) kuchengetedza uye kuwana iyo data yaunoda munzvimbo imwechete.
/ tmp: Mafaira anodiwa nemaapplication kwenguva akachengetwa pano. Vanobviswa kana sisitimu yatangwazve.
/usr: Mafaira emushandisi uye maapplication akaunganidzwa pano uye haana kukosha pakushanda kwehurongwa. Mukati meiyi subdirectory mune / bin, /sbin, uye /lib mafolda.
/ var: Ndiyo subdirectory umo mune mafaira umo sisitimu inonyora ruzivo ichiri kushandiswa.
Maitiro ekugadzira madhairekitori muLinux
Kuraira mkdir ndiyo inoshandiswa kugadzira dhairekitori muLinux
Asati apinda munyaya yechinyorwa ichi, kusikwa kwemadhairekitori muLinux, Isu tinofanirwa kumira pane nyaya yemhando dzevashandisi muLinux uye nhanho yavo yekuwana zvinoenderana nemvumo yedhairekitori.
Tinogona kuisa vashandisi zvinoenderana nerudzi rweakaundi mu:
Root mushandisi account (Mudzi): Iyo ndiyo yepamusoro hierarchy account mukati meLinux system. Inogadzirwa otomatiki panguva yekumisikidza, kunyangwe kumwe kugovera kunopa akawanda eaya mabasa kune wekutanga mushandisi akagadzirwa uye avhare. Iyi account inogona kuita chero basa rekutonga uye kuwana chero nzvimbo mukati medhairekitori kusanganisira iyo / imba yevamwe vashandisi.
Regular user account: Iine maropafadzo ari pakati nepakati uye inokwanisa chete kuita mamwe mabasa uye kuwana nhamba shoma yemadhairekitori.
Maakaundi ebasa: Iwo anogadzirwa nemapurogiramu panguva yekuiswa kwavo kuitira kuti aite maitiro uye mabasa.
Kuti uone kuwana madhairekitori, Linux inoshandisa ma paramita maviri:
MuLinux imwe neimwe yemadhairekitori uye mafaera ane marudzi matatu evanhu vane mukana:
Usuario: Ndiye musiki wefaira uye anonziwo muridzi.
Boka: Kana vashandisi vakawanda vachida kuwana faira zviri nyore kupa maropafadzo ekuwana kune boka uye kuwedzera vashandisi kwairi.
Zvimwe: Vashandisi vasingawire mune chimwe chezvikamu zviviri izvi.
Nekuremekedza kune rimwe nerimwe dhairekitori uye faira zvinokwanisika kupa matatu marudzi emvumo kune akasiyana marudzi evashandisi:
Kuverenga: Iyi mvumo inopa mushandisi kodzero yekuvhura uye kuverenga faira. Panyaya yedhairekitori, iwe zvakare uchave nekugona kunyora zvirimo.
Kunyora: Panyaya yemafaira, ine ropafadzo dzekukwanisa kugadzirisa zvirimo mufaira, asi kwete kufamba, kutumidza zita kana kuidzima. Izvi zvinogona kuitwa kana uine kodzero dzekunyora dzedhairekitori.
Kuuraya: Izvi zvinoshandiswa kudhawunirodherwa nemaoko zvirongwa zvinozvimiririra (hazvidi kudyidzana nemaraibhurari ehurongwa). Bvumira app kuti ishande.
Shandisa iyo terminal kana kuti ita zvine graphic?
Mubhuku rekero / kumba zviri nyore kwazvo kugadzira graphically kugadzira subdirectories, rename, kufambisa uye kudzima. Kana iyo yakarambidzwa kuwana madhairekitori, zvinhu zvakati wedzerei, saka zvinokurudzirwa kuzviita kubva kune terminal emulator.
Mukati me / imba dhairekitori, kugadzira dhairekitori zvine graphic hakuna kukanganisa kukuru. Iwe unongofanirwa kuisa chinongedzo mukati medhairekitori raunoda uye nebhatani rekurudyi sarudza inoenderana sarudzo uye sarudza zita. Muchikamu chezvivakwa tinogona kuona mvumo yekuwana kubva kuZvivakwa menyu. Kuwana madhairekitori akadzivirirwa zvine graphic semushandisi wemaneja kwakaoma uye kunosiyana nedesktop. Naizvozvo, kuti tisarebesa chinyorwa zvisina kufanira, isu tichatsanangura maitirwo acho kubva kune terminal.
Murairo wekugadzira dhairekitori muLinux ndeye mkdir, kupfupisa kwechirungu mutsara gadzira dhairekitori. Kushandisa kuri nyore kwazvo
Semuenzaniso, kana iwe uchida kugadzira dhairekitori linux_addicts
Kana zvatinoda kugadzira akati wandei madhairekitori
mkdir <nombre1> <nombre2> <nombre3> ...
Isu taizosara nezvinotevera:
mkdir linux_adictos desde_linux ubuntulog
Kuona kuti dhairekitori rakagadzirwa
ls -l <nombre1>
Ngatitii tinoda kugadzira dhairekitori mukati meimwe ine inorambidzwa kupinda. Tichifunga kuti tine ropafadzo dzinoenderana dzatinoita
sudo /directorio_contenedor/nombre_de archivo.
Zvingava chinhu chakadai:
Inogona kunge iri nyaya yekuti isu tiri kufarira kugadzira dhairekitori uye dhairekitori rine iro panguva imwe chete. Chimiro chemurairo ndeichi:
sudo mkdir -p /directorio_existente /<nombre_directorio>/<nombre_subdirectorio>
Tinogona kunyora zvakadai se:
sudo mkdir -p /opt/linux_adictos/artículos
Iyo mvumo yekupihwa inoraira kuve:
r: Mvumo yekuverenga.
w: Mvumo yekunyora.
x: Mvumo yekuita.
chmod +rwx nombre_directorio kupa mvumo.
chmod -rwx nombre_directorio kuvabvisa.
Kana iwe uchida kugovera zvibvumirano mukati memadhairekitori akadzivirirwa, unofanira kutangira sudo command. Kana iwe uchida kupa mvumo yeboka, isa ge mushure mechmod.
chmod g + (o -) rwx nombre_directorio.
Ramba uchifunga kuti chete tsamba inoenderana nemvumo yaunoda kupa kana kubvisa ndiyo inoiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekugadzira dhairekitori muLinux uye nemimwe mirairo inobatsira
Nzira yekubvisa sei nzvimbo kubva pamazita emafaira
KDE Plasma Mobile 22.04 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo